ဟန်းဂုရွာ: 2050 CLUB
(2050 Club – (이공 오공) 클럽) 1인당 국민소득 2만(20 Thousand) 달러 이상, 인구 5,000만(50 Million) 명 이상의 기준을 동시에 충족한 국가를 지칭. 현재 일본, 미국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 영국, 한국 이렇게 7개국으로 구성되어있다.
၂၀၅၀ ကလပ် ဆိုတာရှိတယ် ။ သူ့ကို နှစ်ထောင့်ငါးဆယ်လို့ အသံမထွက်ပဲ နှစ်သုည ငါးသုည ကလပ်လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ကိုရီးယားတွေကတော့ (အီဂုံး အိုဂုံး club) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ ကလပ်က ဘာလဲဆိုတော့ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံပါတဲ့ စီးပွားရေး ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေ စုစည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အဖွဲထဲကို ဝင်ခွင့်ရဖို့ စည်းမျဉ်းရဲ့ ပထမအချက် ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ သန်း ၅၀ ကျော်ရှိရပါမယ်။ နောက် ဒုတိယက အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ ( GDP ) ဟာ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၂ သောင်းကျော်နေရပါမယ် ။ GDP ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Gross Domestic Product ပေါ့ ။ နိုင်ငံရဲ့ တစ်နှစ်တာအတွင်း ထုတ်ကုန်တန်ဘိုးပေါ့ ။ နိုင်ငံရဲ့ GDP နဲ့ တစ်ဦးချင်းရဲ့ ဝင်ငွေ GDP ဆိုပြီး ဒီလိုလည်း ခွဲခေါ်လို့ ရမယ် ထင်ပါတယ် ။ ကိုရီးယားလိုတော့ 국내 총생산 လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ GDP ကိုတော့ မွေးကာစ လူမမယ် ကလေးငယ်လေးတွေက အစ ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အထိ အားလုံးသော နိုင်ငံသား အရေအတွက်ကို ပျမ်းမျှထားပြီး တွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာတော့ မွေးကာစ ကိုရီးယားလေးလည်း တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၂ သောင်းအထက် ဝင်ငွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ ။ ဆိုတော့ကာ ၂၀၅၀ ကလပ်ဆိုတာ လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော်ရှိပြီး ပျမ်းမျှ တစ်နှစ် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂ သောင်းကျော်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အဖွဲ့လို့ ဆိုရမှာပါ။ အခု အဲဒီ အဖွဲ့မှာ ဂျပန် ၊ အမေရိကန် ၊ ပြင်သစ် ၊ အီတလီ ၊ ဂျာမဏီ ၊ အင်္ဂလန် နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ ပါဝင်ပါတယ် ။ တောင်ကိုရီးယားကတော့ ဒီအဖွဲ့ထဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဝင်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းက GDP က ၂၃,၆၈၀ ဒေါ်လာပါ ။ အခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ GDP က ၂၈,၇၃၉ ဒေါ်လာအထိ တက်လာပါတယ် ။ ကိုရီးယားတွေ ကလေးက အစ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၂,၄၀၀ လောက် ဝင်ငွေရှိတယ်ပေါ့ ။ ကိုရီးယား တော်တော်လေး ချမ်းသာလာတယ် ဆိုရမှာပါ။
အောက်က ဇယားမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ၂၀၅၀ ကလပ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ လူဦးရေနဲ့ GDP တွေကို နှိုင်းယဉ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ နောက် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ကိုလည်း အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လို့ ရအောင် တင်ပြပေးထားပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လောလောဆယ်မှာတော့ မြန်မာက နိုင်ငံအလိုက် ထုတ်ကုန်တန်ဘိုး GDP ဝင်ငွေမှာတော့ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၇၄ နေရာကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ် ။ လူဦးရေနဲ့ ပျမ်းမျှပြန်ချလိုက်တဲ့ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ GDP အနေနဲ့တော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၇၂ ပါ ။ မြန်မာရဲ့ အထက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၊ သီရိလင်္ကာ ၊ ကမ္ဘောဒီယား ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်နမ် စတဲ့ ကျနော်တို့ အနားက နိုင်ငံတွေ အကုန်ရှိပါတယ် ။ မြန်မာအောက်မှာတော့ ကျနော်သိတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ နီပေါ ရှိပါတယ် ။ နီပေါက ကျနော်တို့ထက် ဆင်းရဲတယ် .. တဲ့ ။ သူ့ GDP က တစ်နှစ်ကို ၆၄၀ ဒေါ်လာ .. တစ်လကို နီပေါ တစ်ယောက် ဝင်ငွေ ၅၃ ဒေါ်လာ ၃၃ ဆင့်ပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးရဲ့ တစ်နှစ် ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေကတော့ တစ်နှစ်ကို ၉၁၀ ဒေါ်လာပါ ။ တစ်လကို မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးဟာ ၇၅ ဒေါ်လာနဲ့ ၈၃ ဆင့် ဝင်ငွေရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ (ကိုရီးယားငွေနဲ့ဆို တစ်လကို ဝမ် ၈ သောင်းလောက် ဝင်တယ်ပေါ့ ) ။ ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာနဲ့ ဝင်ငွေချင်း ယဉ်ရင် ၃၂ ဆလောက် ကွာတဲ့ သဘောပါ ။ ကိုရီးယားတွေ တစ်လ ဝင်ငွေကို မြန်မာတွေက ၃ နှစ်နီးပါး ရှာရမယ်ဆိုတော့ (GDP သတ်မှတ်ချက်အရ ) ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အင်မတန် ဆင်းရဲကြတယ် ဆိုတာကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ငြင်းလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ ။ ဘာလို့ ဒီလောက် ဆင်းရဲနေရသလဲ ဆိုတာကတော့ မိမိတို့ ဘာသာ သီးသန့် နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီး စဉ်းစားကြပါ .. ဒီနေရာမှာ အခြား အကြောင်းကို တင်ပြချင်တာဖြစ်လို့ ဒီအကြောင်းကို မပြောတော့ပါ )
အခု ကျနော်ပြောမယ့် အကြောင်းက UN နဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ။ UN ကနေ ချမှတ်ထားတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်မှာ “ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာ အလုပ်ရွှေ့ပြောင်းပိုင်ခွင့်” များကို ရပိုင်ခွင့်ရှိရမည် လို့ ပြဌါန်းထားပါတယ် ။ ကျနော်ပြောချင်တာက ကိုရီးယား အစိုးရဟာ ၂၀၅၀ ကလပ်မှာလည်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သလို ပိုက်ဆံတွေလည်း ချမ်းသာနေပါလျှက်နဲ့ အနုပညာမှာ ၊ အားကစားမှာ ၊ နည်းပညာမှာ ကမ္ဘာကျော်နေပါလျှက်နဲ့ UN မှာလည်း မစ္စတာ ဘန်ဂီမွန်းကြီး ရှိနေပါလျှက်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ပြောင်ပြောင်ကြီး ချိုးဖောက်နေတာပဲ ဖြစ်တယ် ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော် ဘက်လိုက်ပြောတာ မဟုတ်ပဲ တစ်ခုပြောပြချင်တယ် .. နီပေါတို့ မြန်မာပြည်တို့မှာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်နေကြတယ် ဆိုတာက အဲဒီနိုင်ငံတွေက ဆင်းရဲတယ် .. အစိုးရတွေဟာ ပညာနဲတယ် .. မြန်မာတွေက စကားပုံလေးနဲ့ ပြောမှ နားမှာ စွဲတယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော် အိုဘားမားလို စကားပုံလေး ကြားညှပ်ပြီး ပြောပါ့မယ် .. “မရှိလို့ မလှူ” .. ကျနော်ပြောတာ ဟုတ်ရဲ့လားဗျ .. “မလှူတော့ မရှိ” (လက်ခုပ်သံများ) ။
ဆိုတော့ကာ မြန်မာတို့ နီပေါတို့ စတဲ့ နိုင်ငံ အစိုးရတွေက ပညာနဲပြီး ဆင်းရဲကြတော့ လူ့အခွင့်အရေး အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကို ကောင်းမွန်အောင် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး .. အခွင့်အရေးတွေကို မထိန်းပေးနိုင်တော့ .. ထပ်ဆင်းရဲပြန်ရော .. သံသရာလည်နေကြရတာ .. ။ ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားကတော့ ချမ်းသာပါလျှက်နဲ့ .. ဘာလို့ ဒီလို ကောက်ကျစ်တဲ့ အကျင့်တွေ ကိန်းအောင်းနေရတာလဲ .. တစ်လောတုန်းက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့က တောင်ကိုရီးယားမှာ စိုက်ပျိုးရေး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ဖိနှိပ်မှု ၊ လူတန်းစားခွဲခြားခံရမှု ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ၊ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှု ၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ခံနေရတယ်လို့ .. ကြေညာစာတမ်းထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ အစိုးရက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ .. စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ စလုပ်နေကြတယ်။
အချုပ် ပြောချင်တာကတော့ ကျနော်တို့တွေ ကိုရီးယားရောက်နေစဉ်မှာ နိုင်ငံရေး ၊ အလုပ်သမားအရေး ၊ ဥပဒေ အပြောင်းအလဲ ၊ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အားပြိုင်မှု ၊ စီးပွားရေး စတာတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား ရှိကြရင်း မိမိတို့ရဲ့ အခွင့်အလမ်း ၊ အခွင့်အရေးတွေကို ရှာဖွေရယူနိုင်ကြဖို့နဲ့ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ ကိုယ်ကပဲ အခွင့်အရေးတွေကို လိုက်လံရှာဖွေ ရယူကြတာမဟုတ်ပဲ .. ကိုယ့်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က .. ချမ်းသာသွားတဲ့ .. အင်အားရှိသွားတဲ့ .. လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသွားတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်တွေ ခံစားခဲ့ရတာတွေကို အမှတ်ရ သင်ခန်းစာယူ ပြန်ပြောင်းအောင့်မေ့ရင်း .. ကိုယ့်ထက် အားနဲသူ ၊ ဆင်းရဲသူ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသူတွေ အပေါ် ပြန်လည် ဖေးမ စောင့်ရှောက် နားလည်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အသိအမြင် စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများ မွေးမြူနိုင်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ ဖြစ်ကြပါစေလို့ .. ဆုတောင်းရင်း တရားကို ဒီနေရာမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ .. ။